Nezvedu - Huacheng Automobile Accessories Co., Ltd.
injini mavharuvhu kuti American injini
injini mavharuvhu nokuda Cummins
injini mavharuvhu kuti Caterpillar
injini mavharuvhu kuti John deere
injini mavharuvhu Detroit
injini mavharuvhu kuti Germany injini
injini mavharuvhu kweMercedes Benz
Huacheng Automobile Accessories Co., Ltd.inogadzira mavhavha ekudyisa-ekupedza kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu, iri muPurovhinzi yeHebei, vharuvhu inokodzera rori rinorema, zvekurima, maindasitiri, injini yemumvura, jenareta seti, mota yevanofamba, gasi injini uye mudhudhudhu.
Yedu yegore yekugadzira chinzvimbo inopfuura mamirioni masere pcs evhavha dzakasiyana. Huacheng kambani inosimbiswa ku ISO / TS16949 muna 2008. Yedu vharuvhu yakateedzera mhando inosanganisira American, Japan, Germany injini modhi nemhando dzese dzeinjini injini mhando, yakanyanya kushandiswa kuDiesel injini, tarakita, zvigadzirwa zvekuchera nezvimwe kubva pane yakasvibirira yekuongorora kusvika pakupedzisa chigadzirwa kurongedza, maitiro ese ari pasi pekutonga kwakasimba.
Tine rakazvimirira rekutsvaga uye rekusimudzira timu, inoenderera tekinoroji yekuvandudza uye zvishandiso kukwidziridzwa mumakore achangopfuura, senge: inoenderera choto yekurapa kupisa, U mhando kudzima pavhavha diki magumo, Steli kutenderera pane vharuvhu chigaro, simbisa zvigadzirwa zvedu kusagadzikana uye kuvimbika kwevhavha kuita uye tora kuzivikanwa kwakawanda kubva kumutengi uye musika. tinogona kugadzira chigadzirwa chitsva zvichibva pamuvharo wevharuvhu kana sampuro kubva kumutengi.
Special vharafu bhaa zvinhu, 4Cr9Si2,4Cr10Si2Mo, 21-4N, 23-8N, X60, X80, Inconel751,21-4NWNb.
CNC yekubatanidza kugadzira tambo, inoenderera choto chekupisa kurapwa, kukweshesana kutenderera, Steli kutenderera, U kudzima, chrome yakanamirwa pamifananidzo, yakapfava nitriding
Yegore rekugadzira chinzvimbo
Mwedzi gumi nembiri kana 300000km
Dhizaina uye gadzira chigadzirwa chitsva chinoenderana nesampuli kana kudhirowa.
Hapana qty chinodiwa chechitoro.
Isu tinogara takatarisana kumusika ne "mutengi akatungamira", tichiomerera pane zvemhando zvinangwa "Zvigadzirwa zero kukanganisa, Mutengi zero kunyunyuta", tipe yedu yemakwikwi mutengo uye sevhisi. Isu tiri OEM mutengesi weGeely Commercial Vehicle uye takatumira vharuvhu yedu kuUSA, Germany, France, Poland, Pakistan neIndonesia.
Noushamwari shamwari kubva kumativi ese epasi uye tinotarisira kushandira pamwe newe, tinoda kukupa iwe mavhavha epamusoro uye basa.
Wuji Nyika, Shijiazhuang Guta, Hebei Province, China
injini mavharuvhu kuti japan injini
injini mavharuvhu kuti Korean injini
Ndira-28-2021 Chii chinonzi Chikonzero cheinjini Valve Inorira?
Ndira-28-2021 Ndeapi mabhenefiti eiyo Anochinjika Valve Nguva Yemaitiro?
Ndira-28-2021 Maitiro Ekuita neValve Kukundikana?
Ndira-28-2021 Nzira yekugadzirisa sei Car Injini Valve?